Home Wararka Farmaajo oo caqabad lama filaan ah hor dhigay dadaalkii Midowga Afrika ee...
Farmaajo oo caqabad lama filaan ah hor dhigay dadaalkii Midowga Afrika ee dhexdhexaadinta Doorashada
Wararka laga helay Madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegaya in Madaxweynaha xilligiisu dhammaaday ee Maxamed C/llaahi Farmaajo uu caqabad cusub hordhigay dadaalka Midowga Afrika ku dhexdhexaadinayo dhinacyada Soomaalida si loo xaliyo khilaafka Doorashada Soomaalia.
Xogta la helay ayaa sheegeysa in Dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa qoraal cabasho ah u dirtay Midowga Afrika, kaasoo ay ku dalbaneyso in laga noqdo magacaabidda ergeyga gaarka ah ee Midowga Afrika u soo magacaabay dalka Soomaaliya John Mahama, laguna bedelo qof cusub.
Xogta la helay ayaa sheegeysa in arrintan oo ay soo abaabushay Madaxtooyada Soomaaliya, wasaaradda Arrimaha dibadda sabab looga dhigay in aan magacaabista ergeyga gaarka ah oo ah Madaxweynihii hore ee adalka Ghana Mr. John Mahama aan lagaal tashan, si ka baxsan diblomaasiyadana loo maray iyo inay jiraan dano uu ku leeyahay dalka Kenya.
Tallaabadan uu qaaday Maxamed Farmaajo muddo xileedkiisu dhammaaday, kuna fashilmay muddo kororsi 2 sano ah ayaa lagu sheegay inuu ku doonayo in lasoo magacaabo diblomaasiyiin u dhashay dalka Itoobiya oo dhinaciisa taageersan.
Farmaajo ayaa hore s haaciyey inuu arrimaha Doorasha iyo Amniga ku wareejiyey Ra’iisal wasaare Maxamed Xuseen Rooble, waxaase muuqata inuu weli gacanta kula jirto; iyadoo aan al ogeyn inuu Midowga Afrika aqbali doono dalabkan culus.